Mayelana NATHI - I-Digital Signage ne-Video Wall Software
Yebo, singabantu bangempela! Yazi kabanzi ngathi!
UPatrice umsunguli wezobuchwepheshe we-Easy Multi Display. UngumFulentshi oneminyaka engama-45 ubudala ozimemezelayo nge-geek othakazelwa ubuchwepheshe. Lapha ugibele ibhayisekili lokugcina likagesi Cowboy eBruxelles.
Patrice ungusomabhizinisi onesibindi futhi ubeklama isoftware IVitrine Multimedia iminyaka engaphezu kwengu-15. Amanye amakhasimende akhe afaka i-Airbus, Unicef, Visa, Canon.
Izimpelasonto ezimbalwa njalo ngonyaka, uPatrice uthatha isikhathi esimisweni sakhe esejwayelekile ukwenza njenge-a I-Jockey yevidiyo.
- Azikho izinkinga; kunezixazululo kuphela. -
UGuy ungumholi webhizinisi we-Easy Multi Display. UGuy oneminyaka engama-44 ubudala, ungumuntu obeka engcupheni ingozi, onemvelaphi yaseFrance neyaseVietnam. UGuy ubheka izingane zakhe ezi-2 njengezinto ezinhle kakhulu empilweni yakhe! Lona nguGuy nendodakazi yakhe u-Iris endaweni yokubukisa eBrussels.
Ngemuva kweminyaka emi-5 esebenza njengomphathi wephrojekthi we-IT weCarrefour, usebenze njengoSomabhizinisi iminyaka engaphezu kwengu-15. UGuy ungumuntu ohamba kalula othanda ukuxhumana nokwakha ubudlelwano obuqinile. UGuy noPatrice bahlangana, lapho uGuy efuna isoftware yezimpawu zedijithali yeGumbi lakhe Lempi ledijithali. Kwakungobungani ekuqaleni kokubona.
Yize uGuy kwesinye isikhathi ebona impilo njengento eyinkimbinkimbi, ngemuva kwenkontileka enamabutho akhethekile, uyakuthanda isiqubulo ...
- Ubani onesibindi onqobayo. -
Enhliziyweni yalokho esikwenzayo yisifiso sethu sokwenza ibhizinisi libe lula, libe lula futhi lithengeke kumakhasimende ethu. Ukukhangisa noma ukwethula ibhizinisi lakho akufanele kubize ingalo nomlenze, futhi akumele kudinge amakhono wekhompyutha athuthuke kakhulu.
Sidale i-Easy Multi Display ngoba isoftware ebikhona ibifuna ikhasimende kakhulu. Babedinga ingqalasizinda eyinkimbinkimbi, kungasaphathwa imali ebizayo yanyanga zonke.
Ngokwakha isoftware yezimpawu ezidijithali esheshayo futhi esheshayo ungabonisa imidiya yakho ngendlela ofuna ngayo, ngezidingo zobuchwepheshe nezincane zehadiwe
Uhlelo lwethu lwe-EMD alunakubhaliswa, lunelayisense lokuphila futhi empeleni alisebenzisi ifu.
Okokuqala, kubiza ngendlela esabekayo, futhi okwesibili, akuphephile neze ngoba kuvame ukuphathwa yizinkampani, ngokwengxenye enkulu, ezazi okuncane noma ezingazi lutho ngokuphepha kwe-IT.
Njengoba inani lamacala okugenca * landa ngayo yonke imiphumela emibi engabangelwa yilokhu, amakhasimende ethu kumasayithi abucayi nasezinkampanini ezibucayi awafuni ifu elingu-5.0 ukubonisa ezokuxhumana.
Yenza ukukhetha okufanayo, sebenzisa isoftware yethu (evivinywa futhi yamukelwa ezinye zezinkampani ezinhle ze-CAC 40, unganqikazi ukucela izinkomba zethu ...) futhi ugweme ukuthembela enkampanini yomuntu wesithathu ukubonisa amafayela wakho wemidiya.
* Izinkampani ezingama-36% zithole ukwephuka okukhulu kwedatha noma ukwephulwa kwamafu ezinyangeni eziyi-12 ezedlule ngokusho kocwaningo olwenziwe nguFugue noSonatype.
Uma ufuna ukuxhumana nathi, sicela ubheke ku- "Xhumana nathi"ikhasi.